Known Islam Association Myanmar: ဖန်ဆင်းရှင် တည်ရှိကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်ရှင်းလင်းသော အကြောင်းအရင်းများကို ဖော်ပြခြင်း
ဖန်ဆင်းရှင် တည်ရှိကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်ရှင်းလင်းသော အကြောင်းအရင်းများကို ဖော်ပြခြင်း
(၁) စကြ၀ဠာကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
(၂) စကြ၀ဠာကြီး၏ အစီအစဥ်ကျမှု
(၃) ဗျာဒိတ်တော် - ကုရ်အာန်
အကြောင်းရင်း ၁။ စကြ၀ဠာကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
ဖန်ဆင်းရှင်ရှိကြောင်း ယုံကြည်ရခြင်း၏ ပထမအကြောင်းအရင်းမှာ စကြ၀ဠာ၏ မူလအစနှင့် ဆက်နွယ်နေပါ သည်။
Ø စကြ၀ဠာဟာ ဘာမှမရှိတာကနေ ဖြစ်လာတာလား?
ဒါဟာယုတ္တိမရှိပါဘူး။ မိခင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူပြန်လည်မွေးဖွား တယ်လို့ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာက စကြ၀ဠာဟာ အမြဲတည်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲ တချိန်ချိန်မှာ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။
Ø ဒါဆိုရင် စကြ၀ဠာကိုဖန်ဆင်းထားခြင်းလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ စကြာ၀ဠာကြီးထက် သာလွန်ကြီးကျယ်သော ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ မွတ်စလင်မ်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
မေး။ ဘုရားသခင်ကိုကျ ဘယ်သူကဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲ
ဖြေ။ ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသူမဟုတ်ပါ။ စကြ၀ဠာနှင့်တကွ ကျန်သော အရာခပ်သိမ်းနှင့်မတူပါ။ ဘုရားသခင်သည် အမြဲထာ၀ရ တည်ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အစဟူ၍မရှိခဲ့ပါ။
အ‌ကြောင်းရင်း ၂။ စကြ၀ဠာကြီး၏ အစီအစဥ်ကျမှု
ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံကြည်ရခြင်းရဲ့နောက်ထပ်ရိုးရှင်းတဲ့အ‌ကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ စကြ၀ဠာ၏အစီအစဥ်ကျမှုကို တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
• အစဥ်လိုက်တိကျစွာ ရှိနေတဲ့အရာတိုင်းဟာ ဉာဏ်ပညာရှိမှုကို ဖော်ပြပါတယ်။
• နေအဖွဲ့အစည်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါ၀င်သော စနစ်များ၊ နိယာမများ၊ ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် အသေးစိတ် အစီအစဥ်တကျ ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
• စကြ၀ဠာအတွင်းမှာရှိတဲ့ အစီအစဥ်ကျမှုဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ ဉာဏ်ပညာကို ဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။
စကြ၀ဠာအတွင်းမှာပါ၀င်တဲ့များစွာ‌‌သော အရာ‌တွေဟာ သက်ရှိများရဲ့ဘ၀ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် သေချာဒီဇိုင်း လုပ်ထားတာကို‌ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အတိုင်းအတာ‌‌တွေဟာ အနည်းငယ်မျှ လွဲ‌ချော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဤ‌လောကမှာ သက်ရှိ‌တွေ ရှင်သန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်‌တော့ပါဘူး။
ဥပမာများ - အိုဇုန်းလွှာ၊ ကမ္ဘာ့အ‌ပေါ်ယံလွှာ၏ ထုထည်၊ ‌လေထဲရှိအောက်စီဂျင်၊ နေနှင့်ကမ္ဘာ၏ အကွာအ‌‌ဝေး၊ ကမ္ဘာ၊ လ နှင့်နေတို့၏ အရွယ်အစား။
ကြီးမားရှုပ်ထွေးသော စကြ၀ဠာကြီးဟာ ကြီးကြပ်သူမရှိပဲ အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? အစ္စလာမ်က သိပ္ပံပညာရဲ့ သုတေသန အတွေးအခေါ်များကို အားပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းရှင် ဖန်ဆင်းထားသောပုံစံများကို သိမြင်စေရန် ကူညီ၍ ဖန်ဆင်းရှင်၏ တန်ခိုးတော်နှင့် ဉာဏ်ပညာကို တန်ဖိုးထားတတ်လာစေပါတယ်။
အကြောင်းရင်း ၃။ ဗျာဒိတ်တော် - ကုရ်အာန်
ကုရ်အာန်ဟာ ဖန်ဆင်းရှင်တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုကို ပေးပါတယ်။
ကုရ်အာန်ရဲ့ ရေးဟန်၊ ပညာပေးမှု၊ လမ်းညွှန်မှု၊ စကားလုံးအနှစ်သာရ ကြွယ်၀မှု နှင့် ဖတ်ရှုသူအား ရည်ညွှန်းမှု တို့ဟာ ပြိုင်စံကင်းပါတယ်။
• အမှား သို့မဟုတ် ၊ ဝိရောဓိ ကင်းရှင်းခြင်း
• ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်မှန်၍ရှင်းလင်းသော ဖော်ပြချက်များ
• စာမဖတ်တတ်သူဖြစ်သော တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ထံမှတဆင့်ပို့ချခံရခြင်း
• လူတို့၏အပြုအမူများကိုနက်ရှိုင်းစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း
• သန်းနှင့်ချီသောသူများမှ အာဂုံဆောင်အလွတ်ကျက်မှတ်ထားခြင်း
• ထိုအချိန်တွင် မသိရှိသေးသော သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါရှိခြင်း
“စေ့စပ်သေချာစွာ ယုံကြည်လိုသော သူတို့အတွက် မြေကမ္ဘာ၌ (တစ်ဆူတည်းသော အရှင်မြတ်၏ နိယာမတော်များနှင့် အချုပ်အခြာကို ထောက်ပြနေသော) သက်သေလက္ခဏာတော် များစွာရှိနေ၏။ ထို့ပြင် သင်တို့၏ စိတ်၀ိဉာဥ်များတွင်လည်း ရှိနေ၏။ သို့ပါလျှက် အသင်တို့သည် အမှန်တရားကို မမြင်ကြလေ သလော?” (ကုရ်အာန် - ၅၁ : ၂၀ -၂၁)